ရန်ကုန် ကမ်းနားလမ်း တစ်လျှောက် လျှပ်စစ်ရထား ပြေးဆွဲမှုကြောင့် နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာ ငါးဘီလီယံကျော် ဆ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန် ကမ်းနားလမ်း တစ်လျှောက် လျှပ်စစ်ရထား ပြေးဆွဲမှုကြောင့် နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာ ငါးဘီလီယံကျော် ဆ??
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂ဝ
ခြောက်လအကြာတွင် ရပ်ဆိုင်းသွားသော ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ်းနားလမ်းတစ် လျှောက် လျှပ်စစ်ရထားပြေးဆွဲမှု ကြောင့် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ ငါးဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သြဂုတ် ၂ဝ ရက်၊ ပြည် ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအ ဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ရုံး၏ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့ငွေ စာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်သဘောထား မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာကို ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်သန်းက တင် ပြရာ၌ ယင်းသို့ဖော်ပြပါရှိသည်။
”လျှပ်စစ်ရထား ပြေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ကျပ် ၅ ဒသမ ၆၈၆ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သော်လည်း နေ့စဉ်ပြေးဆွဲခ ရငွေဟာ နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်ရဲ့ အများဆုံး ၁၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိတဲ့အတွက် ကြောင့် နိုင်ငံတော်အတွက်များစွာဆုံးရှုံး ကြောင်း သုံးသပ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ကမ်းနားလမ်းတစ်လျှောက် လျှပ်စစ်ရထားပြေးဆွဲရန် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအ ဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ပြေးဆွဲခဲ့ကြောင်း၊ ဝင်ငွေအရနည်းသဖြင့် ခြောက်လအကြာတွင် ရပ်နားခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏သုံးသပ်မှုမှာ လျှပ်စစ်ရထားပြေးဆွဲရာ နေရာသည် ဘတ်စ်ကားများ ဥဒဟိုပြေးနေသည့် မြို့လယ်ကောင်ဖြစ်ခြင်း၊ ခရီးတိုအတွင်းသာ ပြေးဆွဲနိုင်ခြင်းနှင့် ရထားစီးမည့် နေရာသို့ တစ်ဆင့်သွားနေရခြင်းတို့ကြောင့် အဆင်မပြေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”သို့ပါ၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာတွင် နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးသက် ရောက်မှု ရှိ၊ မရှိ စီစဉ် ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ လျှပ်စစ်ရထားပြေးဆွဲမှု ရပ်ဆိုင်းရသည့်အတွက် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေများ ဆုံးရှုံးရခြင်းသည် စီးနင်းသူ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာခြင်း၊ စီးပွားရေး တွက်ခြေမကိုက် ခြင်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းတွင် ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုများကြောင့်ဟု ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီက သုံးသပ်သည်။
လျှပ်စစ်ရထားကို မူလက ထော်လီ ကွေ့မှစပြီး ပြေးဆွဲရန် လျာထားဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း အေးရှားဝေါဆိပ်ကမ်း၏ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ဝါးတန်းလမ်းမှ စတင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးခင်မောင်သန်းက ပြောသည်။ ”ထိုစဉ်ကပင် ကမ်းနားလမ်းဖြစ်၍ ဆိပ်ကမ်းနှင့်နီးကပ်ခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်းသို့ ကုန်စည်တင်ဆောင်သောယာဉ်များ ဝင်ထွက်သွားလာမှုရှိ၍ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါက အခုကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေကြေးများစွာ အလဟဿဖြစ်ပေါ်မည် မဟုတ်ကြောင်း သုံးသပ်အကြံပြုပါတယ်”ဟု ဦးခင်မောင်သန်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့ ညတွေမှာ လုယက်သူနဲ့ လုယက်ခံရသူများဘဝ ရောက်နေတဲ့ အငှားယာဉ်မောင်းများ
အောင်လံမြို့ သမိုင်းဝင် ကုသိနာရုံဘုရားကြီး (၁၇၇)နှစ်မြောက် ဗုဒ္ဓပူဇနိယ တပေါင်းပွဲတော်တွင် အ?